Nin lagu eedeyey Ururka AL-shabaab Oo dawlada Kenya Diiday in Damaanad Lagu Siidaayo – STAR FM SOMALIA
Maxkamadda Magaalada Mombasa, ayaa waxay diiday in wax damaanad ah lagu sii daayo Mohamed Khalid Ali, oo Booliska Kenya ay la xiriirinayan inuu ka tirsan yahay Ururka Al Shabaab.
Mohamed Khalid waxaa gacanta lagu soo dhigay 26-kii bishii May, ka dib markii Booliska Magaalada Mombasa ay sheegeen in hoygiisa ay ka helayn walxaha qarxa.
Xeer Ilaalinta Kenya, ayaa waxay ninkaasi ku eedeysay inuu kaalin ku lahaa qorshaynta weerarkii uu dhiigga badani ku qubtay, ee 2-dii bishii April lagu qaaday Jaamacadda Magaalada Garissa. Mohamed waa uu diiday eedeymaha loo soo jeediyay.
Maxkamaddu waxay diiday in ninkaasi xabsiga looga sii daayo damaanad lacageed oo dhan toban milyan oo shilinga Kenya. Waxayna Maxkamaddu amartay in xabsiga lagu sii haayo.
Tani, ayaa waxay ka dambeysay markii illaa shan nin oo la sheegay inay dacwadda ku cadayn lahaayen ninkaasi 13-kii bishan afar ka mid ah lagu dilay weerar, ay Ururka Al Shabaab ka gaysteen Degmada Lamu Ee Gobolka Xeebta, halka midka shanaadna lagu dhaawacay.
Kol sii horeysay waxaa soo baxay tuhun laga qabay in ninkan uu ka qayb qaatay dilalka laba ruux oo dalxiisayaal ahaa, oo bishii July ee sanadkii hore loogu geystay Magaalada Mombasa.
Laamaha ammaanka Kenya, ayaa si adag ula dhaqma Muslimiinta Gobolka Xeebta Kenya, taana waxaa loo arkaa inay kordhisay dadka Gobolkaasi ka soo jeeda ee ku biiraaya Ururka Al Shabaab.
Markab Waday In kabadan Laba kun Oo Qaxooti ah oo Boosaaso soo Gaaray